Friday September 11, 2020 - 13:11:06 in Wararka by Super Admin
18 Sanadood ayaa kasoo wareegtay markii ay dhaceen weeraradii 11/9 sanaddii 2001 ee lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington dalka Mareykanka.
iyadoo 19 sanadood laga joogo weeraradii New York iyo Washington Mareykankuna uu qaaday duullanno ka dhan ah Alqaacidda iyo Xulufadeeda wali waxaa muuqata in dagaalka uusan fari ka qodneyn islamarkaana xoogaga jihaadiga ah isku fidiyeen wadamo farabadan oo caalamka islaamka ah.
Maamulka Trump ayaa sanaddii 2019 xuska baroordiiqda ah oo ay u sameynayaan dadkii uga halaagsamay weeraradii 11, Septembar kusoo dhoweeyay liiska Argagaxisada oo ay ku daraan Ururo islaami ah sida Al Qaacidda iyo Xamaas, bayaan kasoo baxay wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in kiyaannadan lagusoo rogay xayiraadda ay halis ku yihiin amniga qaranka Mareykanka sida hadalka loo dhigay.
Hadda oo la joogo 2020 ayay dowladda mareykanka bilaawday in ciidamadeeda kala baxdo qaar kamid ah wadamada caalamka islaamka sida Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan.
Imaarada islaamiga ah ee Taliban loo yaqaan ayaa sanka dhulka ugu jiidday mareykanka kadib markii ay ku qasabtay in uu saxiixo heshiis dhigaya in ciidamadiisa uu kala baxo Afghanistan isagoo dullaysan ayuuna aqbalay dhammaan dalabaadkii mujaahidiinta oo ay kamid ahaayeen in lasii daayo ugu yaraan shan kun oo maxaabiis mujaahidiin ah.